ဂရုစိုက်နေတဲ့ကြားက မထင်မှတ်ပဲ ရောဂါဆိုးကြီးတစ်ခု ဝင်လာကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားအသိပေးလာတဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင် – Shwe Likes
ဂရုစိုက်နေတဲ့ကြားက မထင်မှတ်ပဲ ရောဂါဆိုးကြီးတစ်ခု ဝင်လာကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားအသိပေးလာတဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်
Shwe | April 5, 2022 | Celebrity | No Comments
သေချာဂ ရုစိုက်နေ တဲ့ကြားက မထင်မှတ်ပဲ ရောဂါဆိုးကြီး တစ်ခုဝင် လာကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ပရိသတ်ကြီးအား အ သိပေးလာ တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်
ပရိသတ်ကြီးရေ…..မင်းသ မီးချော နန ္ဒာလှိုင်ရဲ့ မောင်ေ လးဖြ စ်တဲ့ ဒေါက်တာ စိန်ဖြိုးလှိုင်ကို ပရိသတ်တွေလည်း သိကြမယ်ထင် ပါတယ်နော်။ သူဟာ တစ်ချိန်က ‘မောင်’ ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ သရုပ်ဆောင်မ င်းသားတ စ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တာြ ဖစ်ပြီဇာ တ်ကားပေါ င်းစွာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့သူပါ။
အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒေါက်တာစိ န်ဖြိုးလှိုင်ဟာ အနုပညာအ လုပ်တွေကို ရပ်နားလိုက်ပြီဖြ စ်ပြီး ဆရာဝန်တစ်ေ ယာက်အနေနဲ့ ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်….။
စိန်ဖြိုးလှိုင်နဲ့ ရီရီပွ င့်ဖြူတို့ ချစ်သူနှစ်ဦး ကတော့ စိတ်တူကို ယ်တူနဲ့ပျော်စ ရာလေးတွေကို ပရိသတ်တွေ ကို ဝေမျှပေးလေ့ရှိ တာကြောင့် ပရိသတ်များက ချစ်ခင်အားပေးနေ ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပျော်စရာလေးေ တွကိုလည်း အတူတကွလုပ်တတ်ြ ကသလို အလှူအတ န်းမှာဆိုရင် လည်း နှစ်ယောက်သားက တိုင်တိုင်ပင် ပင်နဲ့လုပ်လေ့ရှိ ကြပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာတော့ စိန်ဖြိုးလှိုင်က .ဘယ်လိုကိစ္စတွေပဲကြုံကြုံ Positive ဖြစ်အောင်နေပါ၊
Positive ပဲတွေး ပါ ဆိုတာ ဒီတ စ်ခါမပါပါဘူး..🤪အခု နှစ်ယော က်လုံး COVID Positive ဖြစ်လို့ အိမ်တွင်းအောင်းနေရပြီ😁အားလုံးလဲ သ တိထားကြပါဦးနော်။ ဘာမျိုးစိတ်မှန်းလဲ မသိေ တာ့ပါဘူး။ 😅😅😅” ဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့ပါတယ်နော်… ပရိသတ်ကြီးလည်း သူတို့ကို အားေ ပးစကားလေး ရေးပေးခဲ့ရ င်း ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ကြပါနော်.. Source: Sein Phyo & Yi
ေသခ်ာဂ ႐ုစိုက္ေန တဲ့ၾကားက မထင္မွတ္ပဲ ေရာဂါဆိုးႀကီး တစ္ခုဝင္ လာေၾကာင္း ဝမ္းနည္းစြာနဲ႔ ပရိသတ္ႀကီးအား အ သိေပးလာ တဲ့ စိန္ၿဖိဳးလွိုင္
ပရိသတ္ႀကီးေရ…..မင္းသ မီးေခ်ာ နန ၵာလွိုင္ရဲ့ ေမာင္ေ လးၿဖ စ္တဲ့ ေဒါက္တာ စိန္ၿဖိဳးလွိုင္ကို ပရိသတ္ေတြလည္း သိၾကမယ္ထင္ ပါတယ္ေနာ္။ သူဟာ တစ္ခ်ိန္က ‘ေမာင္’ ဆိုတဲ့နာမည္နဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္မ င္းသားတ စ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရပ္တည္ခဲ့တာျ ဖစ္ၿပီဇာ တ္ကားေပါ င္းစြာ ရိုက္ကူးခဲ့တဲ့သူပါ။
အခုခ်ိန္မွာဆိုရင္ေတာ့ေဒါက္တာစိ န္ၿဖိဳးလွိုင္ဟာ အႏုပညာအ လုပ္ေတြကို ရပ္နားလိုက္ၿပီၿဖ စ္ၿပီး ဆရာဝန္တစ္ေ ယာက္အေနနဲ႔ ရပ္တည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္….။
စိန္ၿဖိဳးလွိုင္နဲ႔ ရီရီပြ င့္ျဖဴတို႔ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ကေတာ့ စိတ္တူကို ယ္တူနဲ႔ေပ်ာ္စ ရာေလးေတြကို ပရိသတ္ေတြ ကို ေဝမၽွေပးေလ့ရွိ တာေၾကာင့္ ပရိသတ္မ်ားက ခ်စ္ခင္အားေပးေန ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေပ်ာ္စရာေလးေ တြကိုလည္း အတူတကြလုပ္တတ္ျ ကသလို အလႉအတ န္းမွာဆိုရင္ လည္း ႏွစ္ေယာက္သားက တိုင္တိုင္ပင္ ပင္နဲ႔လုပ္ေလ့ရွိ ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ေလးမွာေတာ့ စိန္ၿဖိဳးလွိုင္က .ဘယ္လိုကိစၥေတြပဲၾကဳံၾကဳံ Positive ျဖစ္ေအာင္ေနပါ၊
Positive ပဲေတြး ပါ ဆိုတာ ဒီတ စ္ခါမပါပါဘူး..🤪အခု ႏွစ္ေယာ က္လုံး COVID Positive ျဖစ္လို႔ အိမ္တြင္းေအာင္းေနရၿပီ😁အားလုံးလဲ သ တိထားၾကပါဦးေနာ္။ ဘာမ်ိဳးစိတ္မွန္းလဲ မသိေ တာ့ပါဘူး။ 😅😅😅” ဆိုၿပီးေရးသားလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္… ပရိသတ္ႀကီးလည္း သူတို႔ကို အားေ ပးစကားေလး ေရးေပးခဲ့ရ င္း က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ၾကပါေနာ္.. Source: Sein Phyo & Yi
ချစ်သူလေးရဲ့နှုတ်ခမ်းမွေးတွေကို ကြင်နာစွာ တယုတယပွ တ်သပ်ပေးရင်း ကြည်နူးပီတိဖြာနေတယ် ဆိုတဲ့ အေးမြတ်သူ
မြေ Live ဘုရင်မကြီး လို့နာမည်တွင်အောင် တစ်နာရီအတွင်း အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် မြေကွက်များစွာရောင်းထွက်ခဲ့တဲ့ အာဗြဲစိန်
ဒီသမီးလေးကြောင့် ဓမ္မဘက် မှာပဲ ရပ်တည်ပြီး လိပ်ပြာသန့်သန့် နဲ့ ရှေ့ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်
တကယ်ဆို ဒီလိုအချိန်မှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ဆုတွေ ရရှိနေရမှာဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင်